Cha na perforating oghere nke akwa ventilashion na Laser - Golden Laser
Tingcha na Perforating Oghere nke Ngwá Ọrụ Mgbasa Ozi na Laser
Fechaa, mkpọtụ absorption, ọcha ihe onwunwe, mfe ịnọgide na-enwe, niile atụmatụ ndị a emewo ka nkwalite nke ákwà ikuku mgbasa usoro na afọ iri gara aga. N'ihi ya, ina makaakwa ikuku mgbasa abawanyela, nke na-ama aka nrụpụta mmepụta nke ụlọ ọrụ mgbasa ikuku ikuku.
Kpọmkwem na elu-arụmọrụ nke laser ọnwụ nwere ike mfe usoro nke nhazi akwa.
Maka ikuku dispersion ngwa, e nwere tumadi abụọ ahụkarị ihe, metal na akwa, omenala metal duct usoro ihapu ikuku site n'akụkụ-n'ịnyịnya ígwè diffusers. A na-eduzi ikuku na mpaghara a kapịrị ọnụ na-eme ka ikuku ikuku na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na oghere a na-ejikarị na -emekarị ihe ederede na ntụpọ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi; mgbeákwà ikuku dispersion nwere edo oghere tinyere dum ogologo dispersion usoro, na-enye agbanwe agbanwe na edo ikuku dispersion na nwere ohere.Mgbe ụfọdụ, a ga-eji oghere nwere oghere micro-perforated dị warawara nke nta ma ọ bụ nke a na-agaghị emebi emebi iji nyefee ikuku kpụ ọkụ n'ọnụ na obere ọsọ. Mgbasa ikuku na-apụ apụ pụtara ịgwakọta ikuku ka mma nke na-eweta arụmọrụ ka mma maka mpaghara ndị chọrọ ikuku.
Igwe ikuku na-ekesa bụ ezigbo ihe ngwọta ka mma maka ikuku ikuku ebe ọ bụ nnukwu ihe ịma aka iji mee oghere ndị na-adịgide adịgide na 30 yards ogologo ma ọ bụ karịa ogologo akwa ma ị ga-egbutu iberibe ahụ ma e wezụga ime oghere ahụ. Naanị laser nwere ike ịghọta usoro a.
Goldenlaser emeputara igwe CO2 nke mejuputara uzo na uzo nke uzo ikuku nke akwa nke akwa.
Abamuru nke Laser nhazi Textile Ventilation Duct
Ezigbo ma dị ọcha ọnwụ n'ọnụ
Tingcha dispersion oghere mgbe niile kenha ịbịaru
Ebufe usoro maka akpaka nhazi
Cha, perforating na micro perforating na otu ọrụ
Ngbanwe na-agbanwe agbanwe - belata nha na ụdị ọ bụla dịka ọ bụla
Ọ dịghị ngwá ọrụ eyi - na-ịcha mma anọgide
Akpaka akara nke ịkpụ n'ọnụ na-egbochi fraying
Kpọmkwem na ngwa ngwa nhazi
Ọ dịghị ájá ma ọ bụ mmetọ
Ofdị Akụrụngwa Ndị Na-ahụkarị nke Na-ahụkarị Maka Mgbasa Ikuku Dị Mkpa Maka Mbelata Laser na Perforating
Polyether Sulfone (PES), Polyethylene, Polyester, naịlọn, Glass Fiber, wdg
Galvo na Gantry etinyere CO2 Laser Machine
• Njirimara a gantry laser (maka ịcha) + nnukwu ọsọ galvanometric laser (maka perforation na marking)
• Automatic nhazi kpọmkwem site mpịakọta na-enyemaka nke nri, ebu na asọfe usoro
• Perforation, micro perforation na ọnwụ na oké nkenke
• speedgba ọsọ ọsọ ọsọ maka ọtụtụ oghere perforation n'ime obere oge
• Na-aga n'ihu na-akpaka ọnwụ ọnwụ cycles nke enweghi ngwụcha ogologo
• kpọmkwem iji laser usoro nke ọpụrụiche akwa na teknụzụ teknuzu
Obi dị anyị ụtọ ịdụ gị ọdụ banyere Laser Cutting Fabric Ducts and Laser Perforating Holes on Fabric Ducts.
Kpọtụrụ ugbu a!